समुन्द्रभित्र फोटो खिच्न जाँदा भेटियो एकै ठाउँमा सय भन्दा बढी बिमान, यसको वास्तविक रहस्य यस्तो रहेछ ! (फोटो फिचर)
Posted on December 27, 2018 by T NP
एजेन्सी, १२ पुस । प्रशान्त महासागरको बीचमा रहेको मार्शल आइल्याण्ड आँफैमा एउटा रहस्य हो । यो रहस्यमय आइल्याण्डमा पछिल्लो समय अर्को अचम्म लाग्दो कुरा भेटिएको छ । जहाँ सयभन्दा बढी हवाइजहाज एकै ठाउँमा भेटिएका छन् ।
यसबाहेक यहाँ आसपासमा निकै आश्चर्यजनक रहस्यहरु भएको दावी गरिन्छ । एकपटक चर्चित स्कुवाडाइभर ब्रण्डी म्युलर यहाँ पानीभित्रको फोटो खिच्न गएकी थिइन् । त्यतिबेला उनले यहाँ निकै आश्चर्यजनक कुरा देखिन् जसलाई विश्वास गर्न निकै मुस्किल थियो ।
म्युलर पानीको निकै गहिराइमा पुगेकी थिइन् । यहाँ उनले कुनै हवाइजहाजको अवशेष भेट्टाइन । उनले नजिकै गएर यसको फोटो खिच्ने सोच बनाइन् । तर, जब उनी नजिक पुगिन् वास्तविकता निकै आश्चर्यजनक थियो । यो निकै ठूलो लडाकु विमानको अवशेष थियो । म्युलरले आफ्ना साथीसँग मिलेर यो विमानको फोटो खिच्न थालिन् । उनी यो जहाजका अन्य अवशेषको खाजीमा विस्तारै अगाडि बढ्दै गइन् । उनी जान्न चाहन्थिन् यो विमान कसरी दुर्घटना भयो ?
म्युलरले यी विमानको फोटो लिएर आइल्याण्डका मानिसहरुसँग यसबारे जान्न चाहिन् । तर उनीहरुले कुनै जानकारी दिन सकेनन् । त्यसपछि उनले अमेरिकी सैनिक मुख्यालयमा सम्पर्क गरिन् । त्यहाँबाट उनले निकै संक्षिप्त जानकारी पाइन् । उनले यी विमान दोस्रो विश्वयुद्धका भएको मात्रै उनले थाहा पाउन सकिन् । विश्वयुद्धमा जापानलाई हराइसकेपछि अमेरिकाले १०० देखि १५० अतिरिक्त विमानलाई समुद्रमा डुबाउने फैसला गरेको थियो । लडाकू विमानसँगै कैयौं कार्गो विमानलाई पनि यहाँ डुबाइएको बताइन्छ । ती विमान राख्ने ठाउँको अभावमा यस्तो गरिएको बताइन्छ ।